José Zorrilla. Zvakawanda kupfuura Don Juan Tenorio. 4 nhetembo | Zvazvino Zvinyorwa
To don Jose Zorrilla tine chikwereti kwaari zvakanyanya kupfuura iye TenorioAsi don Juan's scoundrel akadya iro rakasara mukurumbira wake senhetembo. Saka nhasi, pachiitiko chake mazuva ekuzvarwa, kare 203 Kukadzi kubva paakazvarwa mu Valladolid, Ndinoita mutero ndichirangarira chimwe cheicho nhetembo basa, iyo inopembererwawo zvikuru uye inozivikanwa. Iye uye zita rake, anoyemurwa uye akazova shamwari José de espronceda zvimwe mazwi akanyanya kudanana erudo mundima yezana ramakore reXIX munyika medu. Ikoko vanoenda 4 yenhetembo dzake.
2.1 Bvisa gore rinonhuwirira kubva mumaziso ako ...
2.2 Ane nhamo uyo akasuruvara!
2.3 Kumwanasikana wangu
2.4 Kuhunyanzvi Spain
Ichokwadi kuti Zorrilla akawana kusafa nemitambo yake se Don Juan Tenorio o Mutengesi, asina kureurura uye anofira, asi yavo ngano (Mutongi akanaka, chapupu chakanyanya, Captain Montoya, Margarita mutendeuki) uye nhetembo Izvo zvakare zvinopfuura zvinoshamisa. Sanganisira madingindira zvechitendero (Hasha dzaMwari), rudo (Ndangariro nekugomera) o uzivi (Ngano dzekupenga).
Aive neshungu vanyori vorudo muverengi Chemhondoro Walter scott, Kure naDumas naVictor Hugo, kana vamwe vake vepanguva iyoyo vakaita seambotaurwa Espronceda kana iyo Mutongi weRivas. Uye zvirokwazvo rakagamuchira simba rayo. Kuzivikanwa kwakauya nenhetembo yaakatsaurira kwaari Mariano Jose de Larra pamariro ake. Uye zvakare akanyora nhoroondo yake yehupenyu mu Ndangariro dzenguva yekare.
Izvi ndizvo 4 yenhetembo dzake pfupi, asi chero munhu anofanirwa kuverenga.
Bvisa gore rinonhuwirira kubva mumaziso ako ...
Kure nemaziso ako gore rinonhuhwirira
kuti kupenya kunotifukidza izvo chiso chako chinopa,
uye tipe, Maria, maziso ako amai,
uko rugare, hupenyu uye dongo riri.
Iwe, bharisamu, mura; Iwe mukombe wakachena;
Iwe, ruva reparadhiso uye renyeredzi nyeredzi,
Ndinoziva uye ndinodzivirira kubva kuutera hunofa
neRopa Dzvene reiye akafira paMuchinjikwa.
Iwe ndiwe, o Maria, mwenje wetariro
iyo inopenya kubva kuhupenyu padyo negungwa rinotambudzika,
uye wakanangana nechiedza chako chakaropafadzwa mberi zvishoma
uyo anorasa uyo anoshuvira kubata muEdeni.
Urge iye, oh august Amai, mweya wako wekutonga
kenduru rakaputswa rebhati rangu risingafare;
muratidze nzira yake neruoko rune tsitsi,
usarega moyo wangu uchirasika maari.
Ane nhamo uyo akasuruvara!
Ane nhamo munhu akasuruvara anodya
Hupenyu hwako mukumirira!
Ane nhamo munhu akasuruvara anozvishingisa
iyo duel yaanokurirwa nayo
asipo anofanira kuyera!
Tariro inobva kudenga
chipo chakakosha uye chinouraya,
Zvakanaka, vadikani garai makamuka
vanoshandura tariro kuva godo
Kana izvo zvinotarisirwa chiri chokwadi,
asi kuva chimera,
mune chokwadi chisina kusimba zvakadaro
uyo anomirira kupererwa.
iyo inoshanda semuganhu,
inokutumira mweya wakaperera
vatore; kubva kuSpain
vanofanira kuenda kunopa, hupenyu hwangu,
mumweya wako nhetembo dzangu,
kutsvoda kwangu mumoyo mako.
Baba vako, kuseri kwegomo
izvo zvese zviri zviviri haisi muganho,
inotakura hushamwari hwechokwadi
yemunyori werwiyo urwu.
Gamuchira, saka, kubva kuSpain
tsvoda uye imba, hupenyu hwangu,
nhetembo mumweya mako
uye kutsvoda pamoyo.
Kana rimwe zuva kubva pagomo iro
pfuura kana kuyambuka muganho,
uchaona mweya wakaperera
ndiani anokuita rwiyo urwu,
kuti vanokudzwa veSpain
ndiani anoziva, hupenyu hwangu,
ipa nhetembo kumweya
Clumsy, inotyisa uye inosiririsa Spain,
Pasi pake, yakazara nendangariro,
Ari kuyamwa mukubwinya kwake
Chii chidiki pane chega chega chinoonekera feat: Mutengesi neshamwari haanyadzise,
Pfuma yako inotengwa nema slags,
Zviyeuchidzo zvako, o! uye nyaya dzako,
Kutengeswa vanotungamira kune imwe nyika isingazivikanwe. Iwe, iwe nyika yevakasimba,
Kuti uwane mubairo iwe unozvipa kune mumwe munhu anogona
Nekusasimudzira maoko ako asina usimbe! Ehe, huya, ndinopika kuna Mwari! nekuti zvasara,
Vapambi vatorwa, vanozvidza sei
Iwe waita Spain ifekitori!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » José Zorrilla. Zvakawanda kupfuura Don Juan Tenorio. 4 nhetembo